Raila Odinga Oo Shaaciyay Sababta Uu Uga Baxay Doorashada Ku Celiska Ahayd Ee Dalka KENYA | Somaliland Today
← DAAWO: Guddoomiyaha WADDANI Ee Gobolka Togdheer Oo Gaashanka Ku Dhuftay Eedo Uga Yimi Xisbiga KULMIYE
DAAWO: Magaalada Burco Oo Tageero Loogu Muujiyay Xildhibaan Nac-Nac Ka Tagitaankiisi KULMIYE →
Raila Odinga Oo Shaaciyay Sababta Uu Uga Baxay Doorashada Ku Celiska Ahayd Ee Dalka KENYA
(SLT-Nairobi)Hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa difaacay go’aankii uu uga baxay tartanka doorashada madaxtinimada isagoo ku adkeysanaya inuu qaadacay doorashada ku celiska ee la qorsheeyay 26ka bishan inay ka dhacdo dalka Kenya. Raila oo wareysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in uusan doonayn ka qeybgalka doorasho hannaankeeda lagu sii go’aamiyay cidda guuleysanaysa.
“Kenya nabad kama sii jiri doonto inta ku shubashada doorashada ay socoto.”ayuu ku hanjabay Raila oo haatan ku sugan magaalada London. Taageerayaashiisa ayaa weli waxa ay ka dhigayaan dibadbaxyo magaalada caasimada ah ee Nairobi iyo galbeedka Kenya, ayagoo diidan go’aan lagu mamnuucay isu soo baxyada.
Wararka ka imaanaya dhanka galbeedka Kenya waxay sheegayaan in booliska ay toogteen laba qof oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha. Deegaanka dadka lagu dilay waa meesha uu ka soo jeedo Raila ee Bondo. Mucaaradka Kenya waxay dalbanayaan in isbedel lagu sameeyo guddiga doorashada oo ay ku eedeynayaan in ay masuul ka ahaayeen qaladkii ka dhacay doorashadii August.
Doorashadaas waxaa wax kama jiraan ku tilmaamtay maxkamadda sare oo sheegtay in qaladaad la sameeyay markii tirinta ay billaabatay. Raila ayaana hadda diiday in uu ka qeybgalo doorashada ku celiska ah taageerayaashiisa ayuu u sheegay in ay dibadbaxaan illaa shaqada laga joojinayo xubno ka mid ah guddiga.
Madaxweyne Kenyatta iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in codeynta u dhicidoonto sidii loo qorsheeyay oo ah 26-ka bishan. Hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka ayaa diiday in uu saxiixo qoraal cadeynaya in uu ka baxay doorashada.
Madaxweyne Kenyatta ayaa ku eedeeyay mucaaradka in ay dhaqaalo badan uu ku baxay u diyaargarowga doorashada ku celiska ah taasoo uu ku sheegay in qarashkaas wadooyin iyo isbitaalo lagu dhisi karay.
Xaalada dalka Kenya ayaa haatan ah mid Allow Sahal ah iyadoo laga cabsi qabo in dagaal sokeeye uu isu bedelo kala fogaanshaha labada siyaasi ee ugu tunka weyn dalka Kenya ee Uhuru iyo Raila kuwaasoo ka soo kala jeeda labada qabiil ee ugu badan dalka Kenya.